WHO dọrọ aka ná ntị banyere ntiwapụ ọhụrụ, US na-egbochi mkpọchi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » WHO dọrọ aka ná ntị banyere ntiwapụ ọhụrụ, US na-egbochi mkpọchi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Onye isi ala US kwusiri ike na ọ ka ga-ewe izu ole na ole iji gosipụta ịdị irè nke ọgwụ mgbochi dịnụ megide Ômicron.
The Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) dọrọ aka ná ntị taa na ụdị Ômicron nke ọhụrụ coronavirus na-etinye nnukwu ihe ize ndụ nke ntiwapụ nke ọrịa ọhụrụ.
WHO dọrọ mba ndị otu 194 aka na ntị na ohere nke ntiwapụ ọhụrụ nwere ike ịkpata nnukwu nsonaazụ, mana ha kwuru na ọ nweghị ọnwụ akọpụtala ugbu a n'ihi ụdị ọhụrụ a.
Onye isi ala US Joe Biden kwuru n'okwu a White House na ụdị ọhụrụ ahụ bụ ihe kpatara nchegbu, mana ọ bụghị ụjọ. Dabere na Biden, ụdịdị a ga-abata n'ala America n'oge na-adịghị anya; ya mere, ụzọ kacha mma n'oge a bụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Tọzdee na-abịa, nke White House, oche nke gọọmentị United States, ga-ewepụta atụmatụ ọhụrụ iji lụso ọrịa a na ụdị ya dị iche iche n'oge oyi. Joe Biden kwuru na atụmatụ a agaghị agụnye omume ọhụrụ na-egbochi mmegharị nke ndị mmadụ ma ọ bụ nwee mkparị. O kwuru, "Ọ bụrụ na a gbara ndị mmadụ ọgwụ mgbochi ma na-eyi ihe mkpuchi, ọ dịghị mkpa maka mkpọchi [mkpọchi] ọhụrụ."
Onye isi ala kwusiri ike na agbanyeghị, ọ ka ga-ewe izu ole na ole iji gosipụta ịdị irè nke ọgwụ mgbochi dịnụ megide Ômicron.
Ọkachamara ahụike Anthony Fauci, onye ndụmọdụ gọọmentị maka ime ihe megide ọrịa a, kwuru na obodo a “doro anya na-acha ọbara ọbara.” "Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ọ ga-agbasa ebe niile," ka o kwuru na N'ajụjụ ọnụ a na netwọk telivishọn Saturday ikpeazụ.
Dị ka amụma si WHO na ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa, a na-atụ anya na ọnụọgụ nke ụdị Ômicron ga-agafe 10,000 n'izu a, ma e jiri ya tụnyere ihe ndekọ 300 emere n'izu gara aga, gwara Prọfesọ Salim Abdool Karim, ọkachamara ọrịa na-efe efe nke na-arụ ọrụ iji luso ọrịa a ọgụ na gọọmentị ndịda. Afrika.
Onye isi ala South Africa, Cyril Ramaphosa, katọrọ na netwọk mmekọrịta ihe ọ kpọrọ ụzọ "ezighi ezi na nke na-abụghị nke sayensị" maka obodo ahụ. Maka Ramaphosa, mmechi nke ókèala na mmachibido iwu ụgbọ elu si mba ndịda Africa na-ewute akụ na ụba nke dabere na njem nlegharị anya, na mgbakwunye na ịbụ "ụdị ntaramahụhụ maka ikike sayensị ịchọpụta ụdị ọhụrụ".
Onye isi ala South Africa kpọrọ oku ka ndị ọchịchị mba ụwa ghara iwepụta ihe mgbochi na ụgbọ elu na mpaghara ahụ.
Ọrịa a agwụla! FITUR ọ kpalitere ịtụgharị uche na njem nlegharị anya ụwa? January 20, 2022
Akụkọ njem nlegharị anya nke Kenya kwa afọ na-egosi olileanya ọhụrụ January 20, 2022
Zanzibar ga-anabata ọgbakọ nkwado ụmụ nwanyị Pan Africa dị mkpa January 20, 2022
Ntughari njem: World Tourism Network na-ahụ oge ugbu a January 19, 2022
China: Nnukwu nkwalite netwọkụ njem ọhụrụ site na 2025 January 19, 2022
Ọdịnihu ọhụrụ nke nhazi ụgbọ elu United Airlines January 19, 2022
8 Ọhụrụ Kọmitii Executive Board nke Skål, 18 ọhụrụ Co-oche January 19, 2022
Jordan iji nwetaghachi oge njem nlegharị anya tupu ọria oria ojoo ka mwepu ika ohuru “Alaeze Oge” ọhụrụ January 19, 2022
Ndepụta ọla edo Condé Nast Traveler 2022: Songtsam Luxury Retreats Sweep Awards January 19, 2022
Flyers Rights na-ebo FAA akwụkwọ maka mbelata oche ụgbọ elu January 19, 2022